निकोटिन सेवनका जोखिम
डा. धनरत्न शाक्य –भर्खर १६मा टेकेको रुपक (नाम परिवर्तित)लाई अरु ठूला मानिसले झैं हातमा चुरोट च्यापी धूँवा उडाउँदै हिड्न मज्जा लाग्छ ।बिहेको जन्तीमा पाएको पानपरागबाट शुरु भएको शितलजीको निकोटिन सेवन अब चेन स्मोकिङमा पुगेको छ । – तल्लाघरे माइली बज्यै तरुनी हुँदैदेखि बिँडी पिउँथिन् । हालै क्षयरोग भएपछि चिकित्सकबाट धुमपान छाड्..
चितवन, १७ जेठ । केहि समययता अस्तव्यस्त बनेको बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्प..
धुम्रपानबारे झुटा हुन् यी पाँच कुरा, के हो वास्तविकता ?
एजेन्सी जेठ १७ – धुम्रपानबारे विभिन्न प्रकारका भ्रम प्रचलित छन् जस्तै यदि स्वस्थ..
त्रिकोणासनका यस्ता फाइदा
दीपक नेपाल योग प्रशिक्षक गरिने आसन भएकाले यसको नाम पनि त्रिकोणासन भएको हो । त्रि..
असल अभिभावक बन्न बच्चालाई यस्तो व्यवहार
विपुला श्रेष्ठ मनोविमर्शकर्ता,होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टर, धा..
थाहा पाउनुहोस्, भ्रमणमा निस्कँदा बोक्नुपर्ने औषधि
नयाँ–नयाँ स्थानमा घुम्ने, ट्रेकिङ जाने प्रचलन पछिल्लो समय बढेको छ । यसरी समूहमा लामो यात्रामा निस्कनुअघि औषधि बोक्न भने बिर्सनु हुँदैन । कहिलेकाहीँ मौसम परिवर्तन तथा थकाइ, भोकका कारण शरीरलाई असर पुग्न सक्छ । त्यसैले कस्तो ठाउँ र कुन उद्देश्यले जाँदै हुनुहुन्छ, सोअनुसार औषधि साथमा बोक्न बिर्सनु हुँदैन । आफ्नो लागि आवश्यक औषधिको व..
बच्चाको आँखामा यसकारण हुन्छ एलर्जी
डा. इन्दुप्रसाद ढुंगेल आँखारोग विशेषज्ञ नेपाल आँखा अस्पताल गर्मी मौसममा बालबालिकाहरूको आँखामा एलर्जीको समस्या देखिन्छ । अझ विशेषगरी ५ देखि ८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामा आँखाको एलर्जी बढी देखिने गर्छ । गर्मी मौसममा एलर्जीका कीटाणुहरू सक्रिय हुन्छन् । बिरुवामा नयाँ पात पलाउने र फूल फुल्ने यो मौसममा बालबालिकाका आँखा रातो हुने, चिल..
एजेन्सी जेठ १६ – तपाईंकी श्रीमती होस् वा प्रेमिका, हरेक सम्बन्धमा केही कुराको ध्यान राख्न निकै जरुरी हुन्छ । तपाईंको सानो गल्तीले पनि सम्बन्धमा दरार ल्याउन सक्छ । तपाईं पनि यदि कुनै सम्बन्ध निभाइरहनुभएको छ भने यो खबर तपाईंको लागि हो । १. सुत्नुभन्दा पहिले ल्यापटप वा मोबाइलः धेरैजसो मानिसहरु राती सुत्नुभन्दा पहिले ल्यापटप वा [&he..
किन फेल हुन्छ मृगौला ? थाहा पाउनुस् यी पाँच ठूला कारण, लक्षण र बच्ने उपाय
एजेन्सी जेठ १६ – मृगौला फेल हुनुलाई ‘एन्ड स्टेज रिनल डिजिज’ पनि भनिन्छ । डाक्टरका अनुसार मृगौला फेल हुनुको अर्थ दुबै मृगौलाले काम गर्न बन्द गरेको र अब डायलाइसिस वा किड्नी ट्रान्सप्लान्ट बिना धेरै दिनसम्म बिरामीलाई बचाउन सकिँदैन । कहिले हुन्छ मृगौला फेल ? हाम्रो शरिरमा दुई मृगौला हुन्छ जसको मुख्य काम रगतलाई फिल्टर गरेर […]
एजेन्सी जेठ १५ – यदि तपाईं पनि आफ्नो पूजा घरमा धेरैजसो धुपबत्तीको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यो खबर तपाईंको लागि हो । सायद तपाईंलाई थाहा होला कि भगवानलाई खुसी गर्नका लागि बालिने यी अगरबत्ती हाम्रो स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक हुन्छ । धुपबत्तीले सासको संक्रमण हुने गर्दछः केही समय अघि गरिएको एक शोधमा घरभित्र बालिने धुपबत्ती स्वास्थ्य..
ओन्ली माई हेल्थ जेठ १५ – प्याज निकै सजिलै पाइने खाद्य वस्तु हो । धेरैजसो मानिसहरु यसको तिखो गन्ध र काट्दा आँसु आउने भएकाले यसलाई रुचाउँदैनन् । तर प्याज कपालका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ । प्याजमा पाइने सल्फरले कपालको जरालाई पोषण दिन्छ जसले कपालको विकासमा मद्दत गर्दछ । त्यसकारण धेरैजसो मानिसहरु कपाललाई लामो बनाउनका लागि […]
एई अन्सारी वरिष्ठ फिजिसियन मोटोपनले शरीरको मेटाबोलिक प्रोसेस स्लो बनाइदिन्छ । कोलेस्ट्रोलको मात्रा पनि बढाउँछ । मेटाबोलिक प्रोसेस स्लो हुँदा र कोलेस्ट्रोल बढ्दा हाई ब्लडप्रेसरको खतरा हुन्छ । मोटोपनले शरीरमा आवश्यकताअनुसार ब्लड इन्सुलिन निर्माणमा समस्या पार्छ । फ्याट बढी भएको शरीरमा भएकै इन्सुलिनले पनि प्रभावकारी काम गर्दैन, तर श..
दीपक नेपाल योग प्रशिक्षक पछिल्लो समय निकै चर्चित प्राणायम विधि हो, कपालभाती । यसमा कपालको अर्थ मस्तिष्क र भातीको अर्थ चम्काउनु भन्ने हुन्छ । त्यसैले यो प्राणायम निरन्तर गर्दा मस्तिष्क र शरीरको बिकारलाई हटाएर शरीरलाई स्वस्थ्य बनाउन मद्दत गर्छ । तर, यो प्राणायम केही रोगका बिरामीले भने नगर्नु नै उत्तम हुन्छ । पेटको शल्यक्रिया गरेका..
एजेन्सी जेठ १३ – केही मिडिया रिपोर्ट अनुसार नायिका सेलिना जेट्लीले दोस्रो पटक जुम्ल्याहा सन्तानलाई जन्म दिँदैछिन् । दोस्रो पटक पनि जुम्ल्याहा सन्तानकी आमा बन्न लागेकोमा आखिर किन र कसरी कोही महिलाले एकभन्दा बढि सन्तान जन्माउँछन् । यस प्याकेजमार्फत यससम्बन्धि विभिन्न प्रश्नबारे जानकारी दिइँदैछ । के हो मल्टीपल प्रेगनेन्सीः इंडियन फ..
काठमाडौं–एक सन्तान भएपछि कसैले पनि यौनको चाहना सकियो भन्ने ठान्न हुँदैन । कतै बिहे गरेपछि यौन बिनाको दाम्पत्य जीवन बिताउनतर्फ त लाग्नुभएको छैन ? त्यसो होइन्, बरु यसलाई अझ उत्साहमय बनाउने प्रयत्न गर्नुतर्फ लाग्नुपर्छ । यसका लागि केही उपायहरु यस्ता छन्ः १. सेक्सको महत्व जो कोहीले पनि सेक्सलाई विशुद्ध सन्तानोत्पादनका लागि आवश्यक क्..
एजेन्सी – फोबिया अर्थात् डर । वैज्ञानिकका अनुसार कुनै कुरासँग लगातार डराउनु नै फोबिया हो । थुप्रै मानिसहरुलाई यसको कारणले प्यानिक अट्याक पनि हुन्छ । हाइड्रोफोबिया (पानीसँग डर) र एक्रोफोबिया (उचाईसँग डर) को बारेमा तपाईंले सुन्नुभएको होला तर आज हामी तपाईंलाई यस्ता ७ फोबियाबारे जानकारी दिँदैछौं जसबारे निकै कम मानिसलाई थाहा छ । माथि..
चितवन, ११ जेठ । भरतपुर अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी सुरु गरेपछि उपभोक्ताले सात गुणासम्म सस्तोमा औषधि पाउन थालेका छन् । सरकारी अस्पतालमा आफैँले फार्मेसी सञ्चालन प्रक्रियागत रुपमा जटिल भए पनि क्रमशः व्यवस्थापन हुँदै जाँदा उपभोक्ता र अस्पताल दुवैले लाभ लिन पाएका हुन् । अस्पतालको फार्मेसी स्टोर प्रमुख राजकुमार ढुङ्गानाका अनुसार बजारमा र..
विजु महर्जन काठमाडौँ, जेठ १० – गर्मीको मौसममा आइसक्रिम मन नपराउनेको होला ? आइसक्रिम हरेक पुस्ताको रोजाईमा पर्छ । यदी तपाईं पनि आइसक्रिम पारखी हुनुहुन्छ भने यो गर्मीसँगै साङ्ग्रीला होटलले ‘समर एण्ड कुल इन साङ्ग्रीला’ भनेर यस आइसक्रिमका पारखीहरुको लागी आइसक्रिमको पर्व नै सुरु गरेको छ । आइसक्रिमसँगै थरीथरी फ्लेभरका स्मुथीहरु समेत म..
कृष्ण अधिकारी काठमाडौँ, ९ जेठ । उच्च शिक्षा हासिल गर्ने सपना बोकेर दुई वर्षअघि राजधानी छिरेकी नवलपरासी गैँडाकोटकी कल्पना (नाम परिवर्तन) काठमाडौँको नाम चलेको क्याम्पसमा भर्ना भइन् । सामाखुसीस्थित आफ्ना काकाको घरमा डेरा लिएर बसेकी उनको सँगै कलेजमा पढ्ने साथी कमल (नाम परिवर्तन) सँगको सम्बन्ध विस्तारै प्रेमका रुपमा मात्र झाँगिएन, अव..
चितवन, ९ जेठ । यहाँको सरकारी अस्पतालमा शिशु सघन उपचार कक्ष स्थापनासँगै नवजात शिशुको अकालमै मृत्यु हुने दर घटेको छ । काठमाडौँको थापाथली प्रसूतिगृहपछि धेरै प्रसूति गराउने अस्पतालका रुपमा रहेको भरतपुर अस्पतालमा एक वर्षमा सरदर १२ हजार शिशु जन्मने गर्छन् । अस्पतालका स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा श्री अधिकारीका अनुसार नवजात शिशुम..
एजेन्सी जेठ ४ – हुन त दुध पिउनु स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ । तर नेशनल इन्स्टिच्युट अफ आयुर्वेद, निखिल शर्माका अनुसार बिहानको तुलनामा राती दुध पिउँदा थुप्रै हर्मोनले प्रभावकारी रुपमा काम गर्दछ । विशेषगरी पुरुषमा यसको असर धेरै हुन्छ । थाहा पाउनुस् यसका ९ फाइदाः यसकारण राती दुध पिउनुपर्छः – दुधमा ट्रिप्टोफेन नामको तत्व ..
एजेन्सी जेठ ३ – द नेशनल डाइट एण्ड न्यूट्रिशन सर्वेका अनुसार ३० वर्ष पार गरेपछि धेरैजसोलाई आवश्यक पोषक तत्व जस्तै आइरन, क्याल्सियमको कमी हुन्छ । थुप्रै डाक्टरहरुले ३० वर्ष पार गरेपछि मेटाबोलिक रेटमा कमी हुने र शरिरमा रोग प्रतिरोधी क्षमतामा पनि ह्रास आउने गर्दछ । यसले थुप्रै रोगको सम्भावना बढ्ने गर्दछ । त्यसकारण तीस वर्ष [&helli..
जेन वेकफिल्ड/बीबीसी जेठ २ – हर्मनी एक नयाँ प्रकारको ‘सेक्स डल’ हो जुन हिँड्न सक्छ र कुराकानी पनि गर्न सक्छ । यसको टाउको, आँखा र ओठ पूर्ण रुपमा तयार छैनन् र यसको कुराकानी पनि सिमित छ । तर यो नयाँ रोबोटिक्स क्रान्तिको हिस्सा हो जसको मानवसँग ठ्याक्कै मेल खाने शरिर र कृत्रिम दिमाग पनि छ […]
कल्पना पौडेल काठमाडौँ, ३१ वैशाख । नेपालमा चिकित्साविज्ञानको क्षेत्रमा पहिलो पटक मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिको अङ्ग झिकी अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गरिएको छ । भक्तपुरस्थित मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रले गत बिहीबार जिप दुर्घटनामा परी मस्तिष्क मृत्यु भएका सिन्धुलीका ३० वर्षीय गोविन्द भुजेलका दुई मिर्गौला दुई व्यक्तिमा प्रत्यारोप..
निजामती अस्पतालमा कर्मचारी र सर्वसाधारणका बेग्लाबेग्लै समयमा सेवा
काठमाडौँ, वैशाख २९ – निजामती अस्पतालले निजामती कर्मचारी र सर्वसाधारणका लागि जेठ १ गतेबाट बेग्लाबेग्लै समयमा बहिरङ्ग सेवा दिने भएको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा दीर्घराज आरसीले विशेष गरी कर्मचारीका लागि खोलिएको अस्पताल भन्दै लामो समय पालो कुर्नुपर्ने गुनासो आउन थालेपछि छुट्टाछुट्टै समयमा बहिरङ्ग सेवा दिन लागिएको बताए । उनल..